काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढे पनि भीडभाड उस्तै! – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढे पनि भीडभाड उस्तै!
रासस साउन २४, २०७७ गते २२:३६ मा प्रकाशित
काठमाडौं – पछिल्ला केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित दैनिक बढिरहे पनि भीडभाडमा भने कमी आएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार काठमाडौँको न्युरोड, असन, इन्द्रचोकमा नयाँ बिरामी थपिने क्रम जारी छ तर नागरिक त्यस क्षेत्रमा कुनै प्रबाह नै नगरी पसलहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्। जोर-बिजोर प्रणाली लागू भए पनि सबै खालका सवारी पनि सञ्चालन भएकै छ । यसले महामारी थप बढ्नका लागि सहयोग पुगेको स्पष्ट हुन्छ।
यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले अत्यावश्यक बाहेक अन्य पसल सञ्चालन नगर्न भनिएको बताए।
लकडाउन खुलेपछि सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक यातायातका साधनले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड समेत पालना नगरेको देखिन्छ। यसले पनि जोखिम बढाएको छ। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करीब एक हजारको हारहारीमा सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ छ।
जसका लागि शुक्रबार उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको बैठक बसेको थियो। यस अवधिभरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने केही विशेष काम बाहेकका सेवा बन्द हुनेछ। बैठकले बजारको अनुगमनलाई तीव्र बनाउनाका साथै सामाजिक दूरी र सुरक्षाका उपाय नअपनाउनेलाई कारवाही गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।